Ngaba ujonge ukujongana nembeko? thatha i-Honor 9 Lite nge-1 euro kuphela | I-Androidsis
Namhlanje, ngoMvulo, nge-5 kaNovemba, uphawu olusekwe eShenzhen, oluxhasa uphawu lwesiTshayina iHuawei, lusisikhumbuzo de kube ngu-Novemba 7, olusuku olusemthethweni lwentetho yalo kwihlabathi, kungoko ke kukho izaphulelo ezingama-20 kuzo zonke iimveliso zebrendi. Ukuba ujonga ifowuni enexabiso eliphantsi, ngoku lixesha lokuba usebenzise okungcono Imbeko.
Kwaye namhlanje banikezela iiyunithi ezi-5 ze-Honor Band isongo esi-1 kuphela nge-euro, ngomso umhla we-6, banikezela ngeeyunithi ezi-6 ze-smartband nge-1 euro. Kodwa ngaphandle kwamathandabuzo olona suku lubalaseleyo lungoLwesithathu umhla we-7, kuba banikela Iiyunithi ezi-7 ze-Honor 9 Lite ephathekayo nge-1 euro kuphela. Ulinde ntoni ukuze wonwabele ukunikezelwa ngeMbeko?
Okungakumbi ukuba sithathela ingqalelo into yokuba Imbeko ye-9 iLite Sisiphelo sendlela enkulu phakathi kuluhlu oluphakathi apho ibandakanyiwe kwaye ineempawu zobuchwephesha ezingaphezulu kokuhlangabezana neemfuno zawo nawuphi na umsebenzisi ophakathi ofuna ukuba i-smartphone isebenzise uthungelwano lwasentlalweni, kwi-Intanethi kwaye onwabele imidlalo okanye usetyenziso olwenzayo. ayifuni zixhobo ezininzi. Makhe sihlolisise iimpawu zayo.
Iimpawu zeHonor 9 Lite
Inkqubo yokusebenzaI-Android 8.0 Oreo
Uluhlu lomntuEMUI 8
Isikrini: 5,65 intshi IPS LCD
Isisombululo kunye noxinano: FullHD +, 2160 x 1080 pixels, 18: 9 umlinganiso wezinto
InkquboI-Kirin 659, i-Octa-core (4 × 2.36 GHz Cortex-A53 kunye ne-4 × 1.7 GHz Cortex-A53)
i-ram: 3 okanye 4 GB
Ukugcina ngaphakathi: I-32 okanye i-54 GB (yandiswa ukuya kuthi ga kwi-256 GB)
Ikhamera yangaphambili: I-13 + 2 MP
Cámara trasera: I-13 + 2 MP
Ibhetri: 3.000 mAh ngentlawulo ekhawulezayo
abanyeUmfundi ongasemva weminwe, iSIM ezimbini
UbukhuluUbukhulu: 151 x 71.9 x 7,6 mm
U bunzima: Iigram ezili-149
Imibala: Luhlaza, mhlophe, ngwevu kunye nomnyama
Esi sikhumbuzo sokuqala kucacile ukuba iNhlonipho ifuna ukuyibhiyozela nezi ukuthengisa ngokukhawuleza Kwaye balandele indlela efanayo nonyaka ophelileyo, xa bevula iwebhusayithi kwi-Europe ukuba bathenge izixhobo ze-Honor, kwaye oko kukuthi banikezela nge-200 Honor 9 mobiles nge-1 euro kuphela, kwaye sithetha ngee-mobiles ezikwi-450 euro .
Kwaye khumbula ukuba unguye Imbeko Ziya kufumaneka kuphela iintsuku ezintathu, kwaye zihlala zisusela nge-14: 00 emva kwemini. Ke ukuba ufuna ukuthatha ezi zixhobo nge-1 euro kuphela khumbula ukuba abasebenzisi abangena kwiwebhu kuqala bayayithatha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » Thatha ithuba lokubonelela nge-Honor kwaye ufumane iifowuni eziphathwayo nge-1 euro kuphela
Ngeli xesha ngekrele elihlaselwe yindlala yedabi, entsha evela kubadali beZombie Age